SQL Server Ithuluzi Lokutakula. SQL Server Lungisa isoftware. Ithuluzi Lokulungisa i-MDF.
Kungani DataNumen SQL Recovery?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile womkhiqizo wokutakula we-SQL. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen SQL Recovery inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye imbangi emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen SQL Recovery kubhema umncintiswano
Isebenza kalula, okusho ukuthi iyamangalisa. Ngiyabonga kakhulu, ikakhulukazi ngoba uma kungenjalo bengizokwazi ukuthola ngokomzimba amafayela obekufanele ngiwenze
Ngo-Mashi 16th, i-2020
Sawubona. Ngivivinya isoftware yakho ukulungisa i-database ye-sql. Ngemuva kokusebenzisa amathuluzi akho sengiyakwazi ukubona yonke idatha yami futhi :)
I-CEO noMsunguli we-Hey Flyer
Isixazululo Sokulandela Amaphutha Avamile Nezinkinga ku SQL Server Ifayela le-MDF
xxx.mdf Akusilo Ifayela Elincane Le-Database
xxx.mdf Akusona Isihloko Sokugcina Ifayela Esilungile
Sql Server Kutholwe Iphutha Le-I / O Elinengqondo Ngokuvumelana Ngokuvumelana: I-Checksum Engalungile
Sql Server Kutholwe Iphutha Le-I / O Elinengqondo Ngokuvumelana Ngokuvumelana: Ikhasi Elidabukile
Phinda ususe amarekhodi noma amathebula ku-Database
Izici eziyinhloko ku DataNumen SQL Recovery v5.9
Amaprosesa asekelwe SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.
Ukusekela ukuthola kabusha idatha nedatha kumatafula.
Ukusekela ukuthola zonke izinhlobo zedatha, kufaka phakathi uhlobo lweXML.
Ukusekela ukuthola ikholomu encane.
Ukusekela ukuthola amarekhodi asusiwe.
Ukusekela ukuthola izinkomba.
Ukusekelwa ukuthola ukubukwa, izingqinamba, imithetho nokuzenzakalelayo.
Ukusekela ukuthola izinqubo ezigciniwe, imisebenzi ye-scalar, imisebenzi ebekwe emugqeni enenani letafula nemisebenzi enenqwaba yethebula.
Ukusekelwa kokuthola nokubethela izinto ezibetheliwe.
Ukusekela ukuthola amafayela amaningi, kufaka phakathi ifayela le-MDF namafayela alo ahlobene ne-NDF.
Ukusekelwa kokukhipha kubuyiselwe idatha kufayela le-MDF.
Ukusekela ukuthola idatha ye-MDF / NDF kusuka kumafayela we-VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) angalimele noma awonakele (*. Vmdk), amafayela we-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd), Amafayela we-Acronis True Image (*. Tib), I-Norton Ghost amafayela (*. gho, * .v2i), amafayela weWindows NTBackup (*.bkf), Amafayela wesithombe se-ISO (*. Iso) namafayela wesithombe seNero (*. Nrg).
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha SQL Server idatha kusuka kuthempelirarifayela le-tempdb.mdf.
Ukusekela ukuthola amafayela we-MDF ne-NDF amakhulu njenge-16TB.
Ihlanganiswe negobolondo leWindows, ukuze ukwazi ukulungisa ifayili le-MDF ngomongo wokuqukethwe (chofoza kwesokudla) weWindows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen SQL Recovery Ukubuyisa Inkohlakalo SQL Server yolwazi
Lapho yakho SQL Server Amafayela e-MDF akhohlakele noma alimele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen SQL Recovery ukuskena amafayela we-MDF futhi uthole idatha eningi evela kuwo ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yimaphi amafayela we-MDF akhohlakele noma onakalisiwe nge DataNumen SQL Recovery, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha amafayela we-MDF.
Khetha ifayili le-MDF elonakele noma elonakele elizolungiswa.
Ungafaka igama lefayela le-MDF ngqo noma chofoza ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola ifayela le-MDF elizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Uma kukhona ifayili elilodwa noma amaningi we-NDF ahlotshaniswa nefayela le-MDF elonakele, ungawangeza futhi:
Uma uyazi ifomethi yomthombo eyonakele yefayela le-MDF, ungalicacisa:
Uma ungacacisi ifomethi, ngokuzenzakalela, DataNumen SQL Recovery izozama ukuhlaziya ifayili lomthombo le-MDF bese inquma ifomethi ngokuzenzakalela.
Ngephutha, DataNumen SQL Recovery izogcina ifayili le-MDF elihleliwe kwifayela elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.mdf, lapho i-xxxx igama lefayela lomthombo le-MDF. Isibonelo, kufayela lomthombo we-MDF iDamaged.mdf, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba iDamaged_fixed.mdf. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ngemuva kwenqubo yokutakula, unga start SQL Server Management Studio nokufinyelela ehambelana database walulama.
Chofoza inkinobho, DataNumen SQL Recovery izokwazisa i- "Xhuma ku SQL Server"ibhokisi lengxoxo, njengoba ngezansi:
Udinga ukusetha ifayela le- Igama leseva futhi Ukufakazela ubuqiniso Okwe SQL Server ngokwesibonelo kukhompyutha yasendaweni noma yesilawuli kude, bese uchofoza inkinobho "Kulungile". Ngemuva kwalokho DataNumen SQL Recovery intando start ukuskena nokulungisa ifayili lomthombo le-MDF. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokutakula, uma ngabe ifayili lomthombo le-MDF lingatholwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje wena start SQL Server Management Studio futhi ufinyelele idatha ku-database ye-MDF etholakalayo.
DataNumen SQL Recovery 5.9 ikhishwa ngoMeyi 3, 2021
DataNumen SQL Recovery 5.4 ikhishwa ngoDisemba 15, 2020
DataNumen SQL Recovery 5.2 ikhishwa ngoNovemba 2, 2020
DataNumen SQL Recovery 5.1 ikhishwa ngoJulayi 11, 2020
Amaprosesa asekelwe SQL Server 2019.
DataNumen SQL Recovery 5.0 ikhishwa ngoJuni 5, 2020
DataNumen SQL Recovery 4.5 ikhishwe ngo-Ephreli 25, 2020
DataNumen SQL Recovery 4.4 ikhishwa ngoMashi 9, 2020
Ukusekela ukuthola idatha ye-XML.
DataNumen SQL Recovery 4.3 ikhishwa ngoDisemba 31, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.2 ikhishwa ngoSepthemba 8, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.1 ikhishwe ngo-Ephreli 11, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.0 ikhishwa ngoDisemba 8, 2018
DataNumen SQL Recovery 3.2 ikhishwe ngo-Okthoba 10, 2018
DataNumen SQL Recovery 3.0 ikhishwa ngo-Agasti 15th, 2018
Thuthukisa ukusebenza ngokucubungula idatha enkulu.
Nciphisa ukusetshenziswa kwememori ekucubungululeni idatha enkulu.
DataNumen SQL Recovery 2.8 ikhishwa ngoMashi 6, 2018
Amaprosesa asekelwe SQL Server 2017
DataNumen SQL Recovery 2.7 ikhishwa ngoMashi 26, 2017
Amaprosesa asekelwe SQL Server 2016.
DataNumen SQL Recovery 2.6 ikhishwe ngoFebhuwari 3, 2017
Ukusekela ukulungisa amaphutha amaningi wedatha.
DataNumen SQL Recovery 2.5 ikhishwe ngoFebhuwari 12, 2016
DataNumen SQL Recovery 2.4 ikhishwa ngo-Okthoba 1, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.3 ikhishwe ngoMeyi 12, 2014
Ukusekela ukubuyisa idatha ye-MDF / NDF kusuka kumafayela we-VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) angalimele noma awonakele (* .vmdk), amafayela e-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), amafayela we-Acronis True Image (* .tib), I-Norton Ghost amafayela (* .gho, * .v2i), amafayela we-Windows NTBackup (*.bkf), Amafayela wesithombe se-ISO (* .iso) namafayela wesithombe seNero (* .nrg).
DataNumen SQL Recovery 2.2 ikhishwe ngoMashi 18, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.1 ikhishwe ngoJanuwari 9, 2014
Amaprosesa asekelwe SQL Server 2014.
DataNumen SQL Recovery 2.0 ikhishwa ngoDisemba 7, 2013
DataNumen SQL Recovery 1.1 ikhishwe ngo-Agasti 3, 2013
Ukusekelwa kokukhipha ifayela ngefomethi ye-MDF.
DataNumen SQL Recovery 1.0 ikhishwe ngoMeyi 11, 2013
Amaprosesa asekelwe SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012.
Ukusekela ukuthola zonke izinhlobo zedatha, ngaphandle kohlobo lweXML.